Zviratidzo muLa Casa de Bernarda Alba | Zvazvino Zvinyorwa
"Imba yaBernarda Alba" Iyo ingangodaro iri mutambo wepamusorosoro naFederico García Lorca uye ine mukati mawo yakakura, yakakosha uye yekufananidzira zvakasikwa inotenderera nepfungwa yerusununguko.
Mutambo uyu unomuka kubva mukukonana pakati paBernarda Alba, anomiririra iyo simba, uye chishuwo chekunzwa kusununguka kubva kune vamwe vevanasikana vake, kunyanya Adela, gotwe ravo.
Lorca, uyo akararama munyama yavo Kudzvinyirirwa pabonde kweungochani hwavo kunotipa nzvimbo yakavharika umo chishuwo chemuviri chinoonekwa sechitadzo uye vakadzi vanogara mazviri vanotongerwa kare kuti vasazive murume. Uku kurambidzwa kunovaremera, zvichikonzera kutsauka kubva kunongedzo dzakatemwa neanotonga Bernarda zvinongotungamira mukufa. Nemurume waBernarda afa, hapana varume, uye hapafanire kuvepo, uye simba rekupedzisira rezvose rinogara pana amai pachavo, vane mudonzvo hapana chimwe kunze kwechiratidzo chemurume chinoruramisa simba rakataurwa.
Iwo mamiriro ekunze anoyeuchidza kwazvo nezveiyo yemonisita, zvichipiwa kuvharwa kwevanasikana mhandara mukati medenga reimba yavo ivo kwavanobva kwavanobva uye mune iyo chimiro chemunhu chakanyanya kurambidzwa. Saka, zvimwe chiratidzo inoratidza izvi zvakafanana: madziro machena anoratidza humhandara uye madziro akora eimba anozivisa kuvharirwa kwavanoiswa
Asi zvishuwo hazvinzwisisi madhamu, nemhandara ADELE Anotakura kushingairira kwake kumagumo ekupedzisira, kutanga achiedza kupenda nemapfekero ake kuchema kusingaperi kweimba sechiratidzo chakajeka chekupandukira uye pakupedzisira kusarudza kuti kuzviuraya kuri nani pane kurarama usingakwanise kuburitsa zvinorova muchipfuva chake. Iye anoda uye anodzoreredzwa, saka haakwanise kubata hupenyu kunze kwemudiwa wake uye nekudaro kurova kwemoyo kwake hakuna basa.
Mutambo unopera sezvaunotanga, naBernarda achiraira vanasikana vake silence uye kukumbira kuti vachengetedze kwavari marwadzo ekuzviuraya kweiye wechidiki wehanzvadzi sezvo, mumaonero avo, kuoneka uye kudzikama zviri pachena kupfuura manzwiro ayo pasi pemamiriro api zvawo achifanira kubuda pachena nekuti kwaizove kuratidza kushaya simba. Uyu mufananidzo unokatyamadza kushoropodza kwakajeka kwetsika dzekare dzinogadzirisa zvishuwo uye zvinongoitika zvega mukuda kwechirongwa chiri pachena kupfuura chechokwadi icho chinosimudzira kururama kwounyengeri kupfuura kunaka.
Mamwe mashoko - Lorca pawebhu
Mufananidzo - Zvaunoda Nhasi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Icho chiratidzo cheLa Casa de Bernarda Alba